Ogaden News Agency (ONA) – Hay’dda Cilmi Baashista Badaha oo sheegtay in $300 million Bishii Laga Qaato Xeebaha Soomaaliya.
Hay’dda Cilmi Baashista Badaha oo sheegtay in $300 million Bishii Laga Qaato Xeebaha Soomaaliya.
Shalay oo kaliye waxaa guud ahaan dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah Amaanka Badaha. Dabaaldegga sanadkan ayaa diiradda saaraya sidii ganacsiga Badaha isaga kala goosha loo horumarin lahaa.
Xeebaha Somaliya ayaa mar ahaa marinada ugu khatarsan ee gaadiidka badda shuftada ku hesho, laakin dhinaca kale taasi waxaa ku lamaanaa jillaabashada ay maraakiibta shisheeyuhu geystaan. Hadaba hay’adda Cilmi-baarista Badaha ee Somaliya ayaa sheegtay in sandkiiba Qarash dhan $300, oo Million laga boobo xeebaha Somaliya.
S/Gaas, Admiral Farax Cumar Axmed, “Farax Qare” gudoomiyaha hay’adda cilmi-baarista Badaha Somaliyeed ayaa isagoo ka hadlayay amaanka xeebaha Somaliya iyo heerka dhaqdhaqaaqyada waxa loogu yeero Burcad-badeeda Somaliya uu qiray inay u egtahay inay soo rogaalceliyeen.
Aqoonyahankan oo saxaafada lahadlay ayaa sheegay in arrimaha kooxahan siiba dhallinyarada ku dhiirigeliya in ay yihiin duruufo dhinaca nolosha ah oo heysta, haba ugu horeysa shaqo la’aanta. Waxaa uu dhinaca kale sheegay in haatan dalka ka wanaagsanyahay sidii uu ahaa oo ay jiraan maamullo maxalli ah iyo dowlad dhexe oo awood leh, isagoona meesha ka saaray in haatan la dhihi karo shuftada badda waa ay ka howlgalayaan xeebaha wadanka.
Admiral Farax Qare, gudoomiyaha hay’adda Cilmi-baarista Badaha Somaliyeed ayaa carrabka ku adkeeyay in dhibaatada amni ee ka jirta xeebaha Somaliya ay tahay wax uu ku sifeeyay Burcad-kalluun. Sanadkiiba ayuu sheegay in Kalluumeysatada sharci-darrada ah ay Somaliya ka macaashaan qarash gaaraya $300, oo million.
Markii ay Soomaaliya gashay qalalaasaha kaddib rididii taliskii Kacaanka waxaa uu dalka beylaha u noqday qowleystada shisheeye oo waxyeello xooggan u geystay deegaanka. Waxaana fursad kale sii siiyay dhallinyaro Somaliyed oo ku andoocaday inay badda difaacayaan laakin falal danbiyo ah ka billaabay xeebaha Somaliya.